Thiha Lu Lin: November 2011
ဒီကဗျာလေးကလည်း စိတ်ကူးယဉ်သက်သက်ပါပဲ။ အသည်းကွဲကဗျာလေးတွေ တင်တာများနေလို့ နည်းနည်းပျော်စရာကောင်းမယ် အချစ်ကဗျာလေး တင်ကြည့်လိုက်ပါတယ်။ ဒါတောင် ဆွေးချင်ချင်ရယ်။ ကဗျာလေးတွေ ဝေမျှချင်နေတဲ့ စိတ်ကလေးနဲ့ သိပ်မကောင်းပေမယ့် တင်လိုက်ပါတယ်။ ဖတ်ကြည့်ပေးပါဦးဗျာ။
Posted by Thiha Lu Lin at 4:56 PM2comments
ဒီကဗျာလေးကတော့ စိတ်ကူးယဉ်ပြီးရေးထားတာ သတ်သတ်ပါ။ ကျွန်တော်က ကော်ဖီကို အရမ်းကြိုက်ပေမယ့် ကျွန်တော့မှာ ကော်ဖီမကြိုက်တဲ့ ချစ်သူတော့ မရှိပါဘူးလေ။ ကဗျာလေးတွေ ရေးရတာ အရမ်းပျော်နေတဲ့ အချိန်တုန်းက ပေါ့ပေါ့ပါးပါးလေး ရေးခဲ့တာဖြစ်ပေမယ့် ခုချိန်မှာတော့ ဒါလေးတွေက အမှတ်တယ တစ်ခုလို ဖြစ်နေပါပြီ။ တစ်ခါတလေတော့လည်း ကော်ဖီ အတူတူ သောက်ရမယ့် ချစ်သူလေးကို ဒီနေ့ထိတော့ မျှော်နေမိပါသေးတယ်။ ဖြစ်ခွင့်ရှိမယ်ဆိုရင် ပေါ့လေ။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၇ နှစ်လောက်က ကျွန်တော့ရဲ့ ခံစားချက်လေးတွေကို ဝေမျှ ခံစားပေးပါဦးဗျာ။
Posted by Thiha Lu Lin at 4:54 PM 1 comments
Posted by Thiha Lu Lin at 2:28 PM0comments
အနှစ်နှစ် အလလ စောင့်စေားနေခဲ့ရသည့် သင်ချစ်ခင်စွဲလမ်းနှစ်သက်နေမိသော မိန်းကလေးထံမှ ချစ်မေတ္တာ တုံ့ပြန်မှုကို အမြန်ဆုံး ရရှိနိုင်မည့် နည်းလမ်းမျိုးကို ယောက်ျားလေးတိုင်း သိလိုကြမည် ဖြစ်ပါသည်။ သင့်ဆီသို့ မိန်းကလေးတိုင်း အခစား ရောက်လာစေမည့် မှော်ဝင်ပီယဆေးမျိုး ရှိမည် မဟုတ်သော်လည်း အောက်ပါ အချက်များအတိုင်း ကြိုးစားလုပ်ဆောင် ကြည့်ပါက ပြိုင်ဘက်များကို အောင်မြင်စွာ ဖြတ်ကျော်နိုင်မည် ဖြစ်ပြီး သင်မျှော်လင့်နေခဲ့ရသည့် အချစ်သရဖူကို ဆွတ်ခူးရယူနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
Posted by Thiha Lu Lin at 11:17 PM0comments
Posted by Thiha Lu Lin at 11:45 PM 1 comments
Posted by Thiha Lu Lin at 6:58 PM 1 comments
Review of Chan Chan's New Album (သိပ်ချစ်တယ်.. အရမ်းမုန်းတယ်..)
ချမ်းချမ်းရဲ့ Album အသစ်ဖြစ်တဲ့ .. သိပ်ချစ်တယ်..အရမ်းမုန်းတယ်.. Album ကို
Album အသစ်အတွက် သီချင်းတွေ ဆိုနေပါပြီ.. ဆိုတာကို ဂျာနယ်ထဲမှာ ရေးထားကတည်းက
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်.. Album အတွက် ပေးလိုက်ရတဲ့ ငွေကြေးနဲ့ ပြန်ရတဲ့ သီချင်းအပေါ်ပျော်ဝင်သွားတဲ့ စိတ်..
သီချင်းရေးဆရာ.. ဂီတအကြောင်းကို ထုံးလိုချေ ရေလိုနောက်လောက်အောင် မသိပေမယ့်
ချမ်းချမ်းကို ချစ်တဲ့ ပရိတ်သတ်တစ်ယောက်အနေနဲ့
ချမ်းချမ်းဆိုတဲ့ သီချင်းကို ကျွန်တော့် Review of Chan Chan's New Album (သိပ်ချစ်တယ်.. အရမ်းမုန်းတယ်..) အဖြစ်
Posted by Thiha Lu Lin at 12:49 PM2comments
ဒီကဗျာလေးကို သိပ်ချစ်ရတဲ့ ချစ်သူလေးအတွက် ရည်ရွယ်ပြီး ရေးပေးခဲ့တာပါ။ ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ တုံ့ပြန်တဲ့ဒါဏ်တွေကို သိပ်ဂရုစိုက်တတ်၊ သိပ်ကြောက်တတ်တဲ့ ချစ်သူလေးက သူနဲ့ကျွန်တော် ချစ်သူဖြစ်စမှာ သူ့အတွက် သီးသန့်ဖြစ်မယ့် ကဗျာလေးတစ်ပုဒ်လောက် ရေးပေးပါလားတဲ့။ ကျွန်တော်လည်း မဆိုင်းမတွဘဲ လက်ခံပြီး ညတွင်းချင်း အပြီးရေးခဲ့ပါတယ်။ ပြီးတော့ ကျွန်တော်တတ်ထားတဲ့ မတက်တခေါက် ဖိုတိုရှော့ ပညာလေးနဲ့ ပေါင်းစပ်ပြီး ပုံဖော်လို့ ချစ်သူဆီကို ပို့ပေးခဲ့ပါတယ်။ ပြီးတော့ သူ့ကို ခွင့်တောင်းပြီးပဲ ကျွန်တော့ Facebook မှာ တင်ဖြစ်သွားပါတယ်။ ကျွန်တော်က သူ့ကို ရည်ညွှန်းကြောင်း သိသာစေမယ့်အချက်လေး အဖြစ် သူ့နာမည်ထဲက စကားတစ်လုံးကို ကဗျာလေးထဲ ထည့်ပြီး ရေးဖွဲ့ပေးခဲ့တာ၊ ဘယ်အချိန်ပြန်ဖတ်ဖတ် ကြည်နူးစေပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ Blogspot ကို ဖွင့်ပေးလိုက်တော့ ကျွန်တော်တည်ဆောက်ဖြစ်သွားတဲ့ ကျွန်တော့ Blog ထဲမှာ ဒီကဗျာလေးကို အမှတ်တယ သိမ်းထားချင်တာကြောင့်ပဲ ဒီနေ့ တင်ဖြစ်သွားပါတယ်။
Posted by Thiha Lu Lin at 11:33 PM0comments
Posted by Thiha Lu Lin at 11:01 PM0comments
Posted by Thiha Lu Lin at 9:39 PM0comments
Posted by Thiha Lu Lin at 10:21 PM 1 comments
ကွယ်ရာ လှိမ့်ရယ်နေမှာ သိနေတယ်။
ငါမှိုင်နေရင် အားပေးဖို့တောင် မင်းသတိမရခဲ့ဘူး။
Posted by Thiha Lu Lin at 10:08 PM0comments
Glee: The 3D Concert Movie တေးစုသစ်လေး ခံစားကြည့်ရအောင်
နိုင်ငံတကာရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲတွေကို နှစ်သက်စွာကြည့်ရှုတတ်ကြတဲ့ လူငယ်တိုင်း အသည်းစွဲ Glee ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲ ထဲက သီချင်းကောင်းလေးတွေကို စုစည်းထားတဲ့ တေးအယ်လ်ဘမ်လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ Glee ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲဟာ ခေတ်လူငယ် တွေကို ထင်ဟပ်ပုံဖော်ပေးထားတဲ့ ဇာတ်လမ်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ နာမည်ကျော်သီချင်းတွေကို ဇာတ်လမ်းတွဲပါ ဇာတ်ကောင်တွေ က ပြန်လည်သီဆိုတဲ့ တေးဂီတဇာတ်မြူး ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲ တစ်ခုဖြစ်တာမို့ ဂီတချစ်သူလူငယ်တွေကြားမှာလည်း အထူးရေပန်းစားပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းတွဲရဲ့ အောင်မြင်မှုကြီးမားခဲ့တာမို့ အဲဒီဇာတ်လမ်းတွဲကို ပြဇာတ်အသွင်နဲ့တောင် ဖျော်ဖြေတင်ဆက်ခဲ့ရတာမျိုးတွေရှိလာပါတယ်။
Posted by Thiha Lu Lin at 9:58 PM0comments
သီချင်းများနဲ့ ပြန်လည်အသက်ဝင်လာတဲ့ Pop မင်းသမီးလေး BRITNEY SPEARS
စကားချီး - အခုဖော်ပြမယ့် ဆောင်းပါးလေးက ကမ္ဘာကျော်တေးသံရှင် Britney Spears နဲ့ အင်တာဗျူးထားသမျှ ကို ဘာသာပြန်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဆောင်းပါးကို ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ထုတ် The Chic မဂ္ဂဇင်း မှာလည်း ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ရေးသားခဲ့သမျှကို ပြန်လည်စုစည်းထားချင်တဲ့ ဆန္ဒနဲ့ ကျွန်တော့ Blog မှာ တင်လိုက်တာပါ။
ဘဝဆိုတာ အမြဲ အတက်အကျတွေနဲ့ ဆန်းကြယ်အံ့အားသင့်စရာ ကောင်းလွန်းတဲ့ အရာပါ။ အောင်မြင်ခြင်းဆိုတာကို ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ လူတကာအားကျလောက်အောင် ရယူနိုင်ခဲ့ပြီး ကံဇာတ်ဆရာရဲ့မှော်ဆရာလို လှည့်စားချက်မှာ အဆိုးတွေချည်းနဲ့ ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့ Pop ဂီတလောကရဲ့ ရွှေမင်းသမီးလေးကတော့ Britney Spears ပါ။ အချစ်မှာ ကံဆိုးပြီးရင်းဆိုးခဲ့ရတော့ ကလေးနှစ်ယောက်အမေအဖြစ်နဲ့ ရပ်တည်နေရင်းက ဘဝရဲ့ အလှည့်အပြောင်းဒါဏ်ကို ရူးသွပ်နေသူတစ်ယောက်လို လုပ်ချင်တာတွေလုပ်ပစ်ပြီး လူတိုင်းက အံ့အားသင့်စရာ ဖြစ်သွား စေခဲ့ပြန်တဲ့ Britney Spears ကို ဂီတလောကမှာတော့ နေရာပျောက်သွားပါပြီလို့ မှတ်ချက်ချခဲ့ကြပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၀၈ ခုနှစ်က ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ “Circus” ဆိုတဲ့ တစ်ကိုယ်တော်တေးစုကလည်း Britney ရဲ့ ဂီတသမိုင်းမှာရောင်းအားအကျဆုံးတေးစုတစ်ခုဖြစ်သွားခဲ့တော့ ဒီမှတ်ချက်ဟာ တကယ်ပါလား လို့တွေးထင်နေတုန်းမှာပဲ၊ Britney Spears ရဲ့ ဘဝကံကြမ္မာက တစ်မျိုးပြောင်းလဲသွားပြန်ပါတယ်။ ပရိတ်သတ်တွေရဲ့ ချစ်ခင်အားပေးမှုကို တစ်လှည့်ပြန်လည် ရရှိလာစေဖို့ စွမ်းဆောင်ပေးလိုက်တာကတော့ အသစ်ထွက်ရှိလာတဲ့ သူမရဲ့ တေးစု “Femme Fatale” ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ခုဆိုရင် အသက် ၂၉ နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ Britney Jean Spears ဟာ ဂီတလောကကို ၁၉၉၉ ခုနှစ်မှာ “… Baby One More Time” တေးစုနဲ့ ဝင်ရောက်လာခဲ့သူပါ။ ဂီတသက်တမ်း တစ်လျှောက် တစ်ကိုယ်တော် တေးစုပေါင်း ခုနစ်ခု တိတိကို ထုတ်ဝေနိုင်ခဲ့ပြီး သားတစ်ဦးနဲ့ သမီးတစ်ဦး မွေးဖွားထားတဲ့ မိခင်လည်းဖြစ်တာမို့ ဂီတလောကနဲ့ အဆက်အသွယ် ကျဲနေသူလည်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ “Blackout”တေးစုနောက်ပိုင်းမှာ ဂီတလောကထဲပြန်လည် အချိန်ပေးနိုင်ခဲ့ပေမယ့် “Circus”တေးစုကတော့ ထင်သလောက် မသွားခဲ့ပြန်ပါဘူး။ ခုထွက်ထားတဲ့တေးစုသစ်ကတော့ အခြေအနေ ကောင်းတယ် လို့ ဆိုရပါမယ်။ သီချင်းတိုင်းကလည်း စိတ်ဝင်စားစရာ ဂီတသစ်ပုံစံတွေနဲ့ပါ။ အရင်တေးစုတွေနဲ့ မတူတဲ့ ခြားနားတဲ့ အကတေးစုလေးအဖြစ် ဖန်တီးထားပါတယ်။ Britney ဟာ သူမရဲ့ အလုပ်ပေါ် တကယ်လည်း အာရုံစိုက်ပြီး လုပ်ခဲ့သလို သူမရဲ့ အောင်မြင်မှုတွေကို ပြန်လည်ရယူနိုင်ဖို့အတွက် လက်ရှိအောင်မြင်နေတဲ့ Lady GaGa၊ Katy Perry၊ Rihanna၊ Ke$ha တို့ထက် သာလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ ဂီတပုံစံနဲ့ သီချင်းတွေဖြစ်အောင် ဖန်တီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ ဆိုချင်ပါတယ်။
အခုလက်ရှိအောင်မြင်နေတဲ့ “Hold It Against Me” နဲ့ “Till The World Ends” သီချင်းတွေ ပါဝင်တဲ့ “Femme Fatale” တေးစုသစ် ကို ပြီးခဲ့တဲ့ မတ်လ ၂၉ ရက်နေ့က ဖြန့်ချိခဲ့တာဖြစ်ပြီး ကလို့ကောင်းမယ့် သီချင်းပုံစံ ထည့်ထားတယ် ဆိုပေမယ့် တခြားအကသီချင်းတွေနဲ့ ကွဲပြားပြီး ခေတ်ရှေ့ပြေးနေအောင် ကြိုးစားဖန်တီးတင်ဆက်ထားပါတယ်။ ဒီတေးစုလေးနဲ့ ပတ်သက်လို့ Britney Spears ကို ကမ္ဘာကျော် Rolling Stone ဂီတမဂ္ဂဇင်းက Steve Knopper က တွေ့ဆုံ စကားပြောထားသမျှကို The Chic မဂ္ဂဇင်းစာရှုသူတွေအတွက် တင်ပြပေးလိုက်ရပါတယ်။
Posted by Thiha Lu Lin at 10:25 PM0comments
အမှတ်တရဆိုတာမျိုးက လုပ်ကြံ ဖန်တီးယူလို့မရတာမျိုးပါ။ ကျနော်ဘဝမှာ ကြုံဆုံခဲ့ရတဲ့ အမှတ်တရတွေ အများကြီးထဲက အင်းလေးဒေသရဲ့ ရွာငယ်လေးတစ်ခုဆီ အလည်ရောက်ခဲ့ပုံလေးကတော့ တကယ့်ကို အမှတ်တရကြီးပါ။
အင်းလေးကို လူတိုင်းနီးနီး ရောက်ဖူးကြမှာပါ။ မရောက်ဖူးသေးရင်တောင် ရောက်အောင်သွားမယ်လို့ အားခဲထားကြတဲ့ မြန်မာတွေအများကြီးပါပဲ။ ကျနော်လည်း အရမ်းသွားချင်ခဲ့တဲ့ နေရာလေးတစ်ခုပါ။ ဒါပေမယ့် ကျနော်ကတော့ မထင်မှတ်တဲ့ အချိန်မှာ မထင်မှတ်ဘဲနဲ့ ရောက်သွားလိုက်ရပါတယ်။ တောင်ကြီးခရီးကို တစ်နေ့တစ်ည ကားစီးလာရတာကြောင့် ခရီးရောက်မစိုက် အင်းလေးသွားခွင့်ကြုံတယ်လို့ ဝမ်းပန်းတသာလာပြောတဲ့ မိတ်ဆွေ အစ်မရဲ့ စကားကို ကျနော် မပျော်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ တစ်ညလုံး အိပ်ပျက်ထားတာမို့ ခုညတော့ ကောင်းကောင်းအိပ်ပြီး နေမြင့်မှ ထမယ်လို့ စိတ်ကူးထားတာကြောင့် နောက်နေ့ မနက်အစောကြီး ထသွားရမယ့် အင်းလေးကို မလိုက်ချင်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့်လည်း ငြင်းမရတဲ့ အကြောင်းတွေနဲ့ ကျနော်ဟာ နောက်တစ်နေ့ မနက် ၄း၀၀ မှာ အဝတ်အစားလဲပြီး အသင့် စောင့်နေခဲ့ရပါတယ်။
Posted by Thiha Lu Lin at 4:25 PM0comments
ဘယ်တော့မှ တိမ်မြုပ်မသွားနိုင်တဲ့ ဂီတပုံစံတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Country ဂီတနဲ့ တစ်ကမ္ဘာလုံးက တေးချစ်သူတွေကို ဖမ်းစားနိုင်ခဲ့တတဲ့ Lady Antebellum အဖွဲ့ရဲ့ တေးအယ်လ်ဘမ်အသစ်တစ်ချုပ်က လူတိုင်းရဲ့ နှလုံးသားကို စွဲဆောင် ဖမ်းစားလိုက်ပြန်ပါပြီ။ “Own The Night” လို့ အမည်ပေးထားတဲ့ ဒီတေးအယ်လ်ဘမ်မှာ Lady Antebellum အဖွဲ့ဟာ သူတို့ကို အောင်မြင်မှုတွေအများကြီးပေးခဲ့တဲ့ “Need You Now” တေးအယ်လ်ဘမ်တုန်းက သီချင်းပုံစံလေးတွေနဲ့ ထပ်ပြီး ကြိုးစားတင်ဆက်လာပါတယ်။ ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၁၃) ရက်နေ့က စတင်ဖြန့်ချိခဲ့တာဖြစ်ပြီး သီချင်း စုစုပေါင်း (၁၂) ပုဒ် ထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်။ တေးအယ်လ်ဘမ်ထွက်ထွက်ချင်းပဲ Billboard 200 နဲ့ Billboard Top Country စာရင်းအသီးသီးမှာ နံပါတ် တစ် နေရာ ချိတ်နိုင်လောက်အောင်ကို အောင်မြင်မှုရသွားခဲ့တာမို့ နားဆင်ချင်စရာကြီး ဖြစ်နေတဲ့အပြင် ဂီတဝေဖန်ရေးဆရာတွေကလည်း Lady Antebellum အဖွဲ့ရဲ့ အဆိုပညာဟာ အရင်တေးအယ်လ်ဘမ် နှစ်ခုထက် ပိုပြီးတိုးတက်လာတယ်လို့ ချီးကျူးထားတာမို့ ပိုပြီးစိတ်လှုပ်ရှားနားဆင်ချင်စရာ ဖြစ်နေပါတယ်။ သီချင်းအများစု ကတော့ စုံတွဲသီချင်းပုံစံလေးတွေ ဖြစ်ပြီး အချစ်သီချင်းကောင်းလေးတွေ ဖြစ်ကြပါတယ်။ ဒီတေးအယ်လ်ဘမ်ထဲကနေ စင်ဂယ်လ်သီချင်းတွေအဖြစ် ထုတ်ဝေလိုက်တဲ့ တေးသီချင်းနှစ်ပုဒ် We Owned The Night နဲ့ Just A Kiss တွေကလည်း တေးချစ်သူတွေကြား ချက်ချင်း အောင်မြင်သွားပြီး Billboard 100 နဲ့ Billboard Hot Country Songs စာရင်းတွေမှာ နေရာကောင်းတွေ အသီးသီးချိတ်လိုက်နိုင်ခဲ့ပါသေးတယ်။ When You Were Mine, Love I’ve Found In You နဲ့ Somewhere Love Remains တို့လို အချစ်သီချင်းကောင်းတွေလည်း ကြည်ကြည်နူးနူး နားဆင်ကြရဦးမှာပါ။ Country သီချင်းချိုလေးတွေကို နှစ်သက်ကြတဲ့ လူငယ် လူကြီးမရွေး လက်ခံနိုင်မယ့် တေးအယ်လ်ဘမ်အသစ်လေးက လာမယ့် ဂရမ်မီ ဆုပေးပွဲမှာလည်း ဆုပေါင်းများစွာ ပိုင်ဆိုင်နိုင်ဦးမယ်လို့ ခန့်မှန်းရပါတယ်။
Own The Night (LADY ANTEBELLUM) Album Mini-Info
Posted by Thiha Lu Lin at 12:33 AM0comments
ဒီကဗျာလေးကို ရေးခဲ့တာ လွန်ခဲ့တဲ့ ၅ နှစ်လောက်ကပါ။ ၅ နှစ်လောက်က အတွေးအရေးဟာ အခုအချိန်မှာတော့ တစ်မျိုးတစ်မယ် ပြောင်းလဲခဲ့ပေမယ့် အဲ့ဒီအချိန်လေးတစ်ခုကို ပြန်တမ်းတမိတဲ့ စိတ်တစ်ခုနဲ့ ဒီကဗျာလေးကို ဒီ စာမျက်နှာပေါ် တင်လိုက်ပါတယ်။ ဒီကဗျာကို ပထမဆုံး Friendster မှာ စပြီး တင်ခဲ့တာပါ။ Comment တွေ တော်တော်ရခဲ့တဲ့ အတွက် အရမ်းပျော်ခဲ့ဖူးပါတယ်။
တချုို့တွေကလည်း ကျနော့ကဗျာလေးကို ကြိုက်ဖူးခဲ့ပေမယ့် ဒီစာသားတွေအားလုံးဟာ ကျနော့စိတ်ခံစားချက်တွေ မဟုတ်ဘူး။ That's all fake လို့ နာနာကျည်းကျည်း ပြန်ရေးသွားတာကြုံဖူးပါတယ်။ သေချာတာကတော့ ခုချိန်ထိ ကျနော် ဘယ်သူ့ကိုမှ စိတ်မနာစေခဲ့သေးပေမယ့် စိတ်နာစရာဖြစ်သွားခဲ့ရင်လည်း စိတ်မကောင်းပါဘူး။ အမှန်တော့ ဒီကဗျာဟာ ကျနော် တကယ်ဝမ်းနည်းစရာ ကြုံချိန်မှာ ရေးထားခဲ့တာပါဗျာ။
Posted by Thiha Lu Lin at 8:52 PM0comments
Posted by Thiha Lu Lin at 8:52 PM3comments
Posted by Thiha Lu Lin at 8:47 PM4comments
မင်းရော ငါရော ဟာ...အပြစ်မကင်းတဲ့သူတွေချည်းပဲပေါ့ ချစ်သူရယ်...
ခွဲခွာဖို့စိတ်ကူး ဦးဆုံးကို မတွေးခဲ့ဘူးသူက...
ရင်မှာ နင့်အောင် ကြေကွဲပြီး....
လူမသိတဲ့ တိတ်တဆိတ် လမ်းခွဲမှာတော့....
ကဲ... မငိုနဲ့ ချစ်သူ....
Posted by Thiha Lu Lin at 8:33 PM0comments
တစ်ခါက သားအဖ နှစ်ယောက်သား တောင်တန်းတွေကြား လမ်းလျှောက်ထွက်လာခဲ့ကြတယ်။ တစ်နေရာမှာ သားဖြစ်သူက ရုတ်တရက်ချော်လဲသွားပြီး လဲသွားလို့ခံစားရတဲ့နာကျင်မှုကြောင့် “အား!” လို့ စူးစူးလေး အော်လိုက်မိတယ်။
ဒီအချိန်မှာပဲ တောင်တန်းတစ်နေရာကနေ သူအော်လိုက်တဲ့ အသံနဲ့ထပ်တူ “အား!” ဆိုတဲ့အသံကို သားဖြစ်သူက အံ့သြတကြီး ကြားလိုက်ရတယ်။
Posted by Thiha Lu Lin at 7:01 PM2comments
Posted by Thiha Lu Lin at 6:50 PM0comments
Posted by Thiha Lu Lin at 6:40 PM0comments
ငယ်ငယ်က သိခဲ့တဲ့ ဘ နဲ့ ဝ ဟာ ကျောင်းဖတ်စာထဲမှာ
ကျန်ရစ်ရင်း… ကျန်ရစ်ရင်း… နဲ့
ဘဝ ကို ခုချိန်မှာ ကောင်းကောင်းကြီး နားလည်တတ်ခဲ့ပြီ။
ခြစ်တတ်ခြင်းနဲ့ စခဲ့တဲ့ ငါ့လက်ရေးဟာလည်း ဗလာစာအုပ်တွေထဲ
အချစ် ကို ခုတော့ ကောင်းကောင်းကြီး သိတတ်နေခဲ့ပြီ။
ခံစားစရာ တစ်စုံတရာ ကြုံလာခဲ့ရင်
မျက်ရည်မကျတတ်အောင်လည်း ငါ အံ့ကြိတ်ခံတတ်နေပြီပဲ။
ဒါဟာ ဘဝ ဆိုတာလား…
ဒါဟာပဲ အချစ် ဆိုတာလား…
ကြုံရသမျှ အကောင်းလို့ စိတ်ထဲမှတ်ယူရင်း၊ ခံနိုင်ရည်မွေးခဲ့တဲ့
(မေလ ၁၀ ရက်နေ့၊ ၂၀၀၆ ခုနှစ်)
မှတ်ချက်။ ။ ဟိုးတုန်းက ရေးထားခဲ့ဖူးတဲ့ ကဗျာစာအုပ်လေး စာအုပ်စင်ရှင်းရင်း ပြန်တွေ့လို့ အဲဒီကဗျာစာအုပ်ထဲက တချို့ကဗျာလေးတွေ ပြန်တင်ဖြစ်တာပါ။
Posted by Thiha Lu Lin at 6:30 PM2comments